Voampanga Ho Nanararaotra Ireo Mpifindra Monina AFrika Atsimon’i Sahara Ny Mpitandro ny Filaminana Maraokanina · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 23 Febroary 2015 3:21 GMT
Vakio amin'ny teny Español, čeština , Français, Ελληνικά, English
Fefin'ny sisintany miaraka amin'ny toeran-ny mpiambina ao amin'ny sisintanin'i Espaina sy Maraoka ao Melilla – CC-BY-2.0 via Acad Ronin
Nihevitra ny manampahefana Maraokanina fa manana tantaram-pahombiazana azo aseho amin'ny politikany vaovao momba ny fifindra-monina. Saingy nirodana avokoa ny zava-drehetra.
Tamin'ny fiandohan'ity volana ity, nanambara i Maraoka fa nahavitra nametraka fandaharan'asa manokana handaminana ireo mpifindra monina. Nanambara ny manampahefana fa fangatahana hahazo taratasim-pifindramonina 27 000 no nodinihana ary 60 isan-jato tamin'izany no nankatoavina.
Isan-taona, mpifindra monina Afrikanina an-jatony no mankao amin'ireo faritra akaikin'i Melilla, iray amin'ireo tany Espaniola roa ao avaratr'i Maraoka, ary manantena hitsambinkina ao amin'ny fefin'ny sisintany mba hipaka any Eoropa.
Tamin'ny 10 Febroary, nanomboka nandrava ireo tobin'ny mpifindra-monina ao akaikin'i Melila ao amin'ny sisintaniny Espaniola i Maraoka mba handroaka ireo mpifindra-monina hiala ao amin'ny firenena. Nandritra ny nanatanterahana izany fandravana izany no nitateran'ireo vondrona mpiaro ny zon'olombelona fa nampiasa herisetra tamin'ireo mpifindra-monina izay niezaka hifindra monina ao Espaina ny mpitandro ny filaminana ao an-toerana.
Hoan'ireo mpikatroka ny zon'ny mpifindra-monina ao Maraoka, toa hita fa mahazatra ny tantara. Tamina tatitra tamin'ny taon-dasa, dia hoy ny fanamarihan'ny Mpanaramaso ny Zon'olombelona:
Toa efa nitsahatra ny ny fandroahana tsy misy filazana mialoha nahazo ireo mpifindra-monina ao amin'ny sisintany miaraka amin'i Alzeria. Na dia izany aza, mampiseho ny fikarohana tamin'ny faran'ny volana Janoary sy ny fiandohan'ny volana Febroary 2014 tao Oujda, Nador ary Rabat fa mbola mampiasa herisetra amin'ireo mpifindra-monina voaraoka ao Melilla ny mpitandro ny filaminana Maraokanina.
Nampiakarin'ny Fikambanana mpiaro ny Zon'Olombelona Pro.De.In tao amin'ny Vimeo iray volana lasa izay ity lahatsary manaraka mampiseho ny sisa tavela tamin'ny tobin'i Melila ity:
Nitatitra ihany koa ny fikambanana fa mpifindra-monina an-jatony no notaterina tany amin'ny toerana tsy fantatra. Nanoratra tamina lahatsoratra bilaogy i Hicham Rachidi, Sekretera Jeneraly ny Fikambanan'ny Maraokanina Mpiaro ny Mpifindra-monina (GADEM) fa tsy mazava aminy ny antony nahamaika tampoka nandrava ny toby kanefa nisy ny fivoarana vita:
Tamin'ny fotoana nampisehoanay tamin'ny fanoratan-gazety ao amin'ny firenena sy ny iraisampirenena ny sarin'ny “fikarakarana maha-olona sy ny fiantrana” nataon'ireo mpitandro ny filaminana nanavotra ireo mpifindra monina tamin'ny faharendrehana anaty rano sy ny namerenan'i Espaina azy ireo, ary tamin'izany fotoana nanambarana ny tarehimarika “manome voninahitra” tamin'ny fanomezana taratasy manokana, dia marobe ireo hetsika fanadiovana notontosaina tao amin'ireo toby “tranquillos” [milamina mangina] izay nampiantrano mpifindra-monina an-jatony ao Gourougou. Nozimbazimbaina ny fitsipika tokony arahina, nopotehina ny rariny, nohitsakitsahina ny lalàm-pahamendrehan'ny ankizy, vehivavy ary lehilahy.
Pikantsarin'ireo Afrikana mpifindra monina ao amin'ny Toby Gurugú, avy amin'ny lahatsary eo ambony.
Nanangona fijoroana vavolombelona vitsivitsy avy amin'ireo mpifindra monina ny fikambanana La Terre d'Asile (Tanin'ny Fialokalofana). Sylvain, mpifindra-monina iray avy ao Côte d'Ivoire nampahatsiahy izay nitranga tao Melilla tamin'io andro io:
Tamin'ny fisamborana anay, nohodidin'ireo miaramila izahay. Nisy fiara fitateram-bahoaka enina niandry anay, nasaina niakatra tao anatin'izany fiara izany izahay. Avy eo, naharitra ora maromaro ny nitondrana anay tany amin'ny tany hay. Tsy fantatray ny toerana nandehanana. Nentina tany amin'ny karazana trano misy efitra fito izahay. Tsy mitovy amin'ny fonja izany, fa toy ny toby fitazonana vonjimaika. Avy eo nosarasarahana izahay. Tao amin'ny efitra nitazonana ahy, Ivoariana roa ambin'ny folo izahay no atao anaty efitra mirefy 15 metatra toradroa.
Nanampy vaovao antsipirihany ny “No Borders Maroc” mikasika ny toerana misy sy izay manjò ireo mpifindra monina taorian'ny nandrobana ny toby:
Nandritra ny tontolo andro, fiara fitateram-bahoaka teo amin'ny 20 sy 30 teo no niainga ho any Atsimon'i Maraoka ary nizarazaràna ireo Gurugu gadra tamin'ny tanàna am-polony samihafa: Errachidia, Goulmina, El Jadida, Safi, Kelaat, Sraghna, Chichaoua, Tiznit, Essaouira, Youssoufia, Agadir. Hatramin'izao, mbola maro ireo olona any am-pitazonana amin'ny trano samihafa, omena sakafo sy fitafiana izy ireo. Na dia izany aza, nolazaina izy ireo fa havoaka tsy ho ela, ary nalain'ny fanjakana Maraokana ny karam-panondron'izy ireo mba handaminana ny momba azy ireo, toa toy ny hoe nalefa sesitany ireo mponin'i Gurugu [..] Tamin'izany fandaminana izany, nanitsakitsaka ireo lalànany manokana maromaro i Maraoka, anisan'izany ny fisamborana zaza tsy ampy taona, ny tsy fisian'ny fanadihadiana momba ny olona tsirairay, na ny fihazonana olona mihoatra ny 24 ora tsy amin'ny antony.
Naneho ny ahiahiny ny Vaomiera Eoropeana mikasika ny fomba fitantanan'i Maraoka ny fahasalamana sy ny fikarakarana ireo mpifindra-monina.
Vaovao efa taloha ny krizin'ny fifindramonina ao amin'ny sisintanin'i Maraoka sy Espaina. Tamin'ny Oktobra 2014, nampiseho ny tsy fitoviana goavana izay nahatonga ny krizy ny sarin'ireo mpifindra-monina miezaka mananika ny fety raha milalao golf metatra vitsy monja miala eo ireo mpilalao golf. Nampiseho mpifindra-monina Kameroney nodarohan'ny polisy Espaniola ary tsy nahatsiaro tena kosa ny lahatsary iray hafa avy eo.